Kuzvikudza uye Kusarura naJane Austen | Zvazvino Zvinyorwa
Alberto Makumbo | | Type, Mabhuku, Literature, Novela
Pakutanga kwezana ramakore reXNUMXth, kunyora nezve vakadzi vakasunungurwa uye kusvika pamatambudziko avo erudo nenzira inosetsa yakanga isiri iyo yakajairwa chinhu. Muchokwadi, machismo yakaramba ichivapo munzvimbo dzese dzenzanga, kusanganisira pasirese zvinyorwa. Inofungidzirwa imwe yenhau dzekutanga dzevakadzi munhoroondo, Kuzvikudza uye Kusarura naJane Austen Iyo ndeimwe yeaya echinyakare iyo inokodzera kuverengerwa kamwechete kamwe muhupenyu hwako.
1 Zvinyorwa zveKudada uye Kusarura
2 Kudada uye Kufungira zvisizvo vanhu
2.1 Vanonyanya kutaurwa
2.2 Vatambi vechipiri
3 Kuzvikudza uye Kusarura: Chiitiko Chinokosha muNhoroondo yeMabhuku
Zvinyorwa zveKudada uye Kusarura
Gara mumaruwa eChirungu, kwete kure neLondon, Pride uye Prejudice nhoroondo hupenyu hwemhuri yeBennet nevanasikana vavo vashanu kuroora, vese vari pakati pemakore gumi nemashanu kusvika makumi maviri nematatu ekuberekwa: Jane, mukuru, Elizabeth, Mary, Catherine naLydia. Vechidiki vashanu avo amai vavo, Mai Bennet, vanoshuvira mukwikwidzi akanakisa senzira yekubuda mumamiriro ezvinhu akagadziriswa nepfuma yemhuri inozogarwa nehama yevanasikana vavo, William Collins, mushure mekufa kwaVaBennet.
Pakati pehanzvadzi dzese, Erizabheti ndiye anowana mukurumbira mukuru kuva mukadzi wechidiki akazvimiririra, zvakare anofambiswa naCharles Bingsley, shoroma akapfuma waanosangana naye kumafaro uko Elizabeth zvakare sangana naVaFitzwilliam Darcy, Millionaire anoramba kukumbira Erizabheti kuti atambe nekuti haamuone seakanyanya kunaka. Ruzivo rwunogamuchirwa ne protagonist nekumwe kudada, kunzwa kunozomuperekedza panguva yenyaya iyo kusangana kwake kwakasiyana naVaDarcy kunomutsa mukati mavo ese ari maviri kukwezva kukuru, kwakakanganiswa chaizvo nekudada nekusarura kwakamutswa pakati pavo.
Nyaya yerudo yakatarwawo nezveramangwana rehanzvadzi dzakasiyana dzaBennet uye yavo yekuda kuroorwa nemurume anogona kuvapa ramangwana rakanaka, iro rinogara richiita serinovimbisa kana murume ane mari achida kutanga chirongwa.
Kudada uye Kufungira zvisizvo vanhu
Elizabeth bennet: the Kuzvikudza uye Kufungira zvisizvo protagonist ndiye wechipiri pahanzvadzi shanu. Musikana ane makore makumi maviri anoratidzira kubva panguva yekutanga nhevedzano yemazango akabviswa kumukadzi wekuteerera uye anoteerera wenguva iyoyo: anogadzira uye ane hungwaru, anozvimirira, uye ane kuseka kukuru. Nguva dzose inotungamirwa nemaonero ekunyepedzera anoshandiswa kumunhu mumwe nemumwe nemumiriri waanosangana naye, nyika yaElizabeth inochinja zvachose paanosangana naVaDarcy.
Fitzwilliam Darcy: Mukadzi protagonist werinovhura anotanga senge rudo rwechipiri rwaErizabheti, achive hunhu pane iyo yekupedzisira "kudada nekusarura" inodururwa pabasa rese. Akangwara uye akapfuma, asi zvakare anonyara - hunhu hwakavanzwa pasi peimwe kuzvitutumadza - VaDarcy vanoona Elizabeth semunhu akaderera mune zvemagariro uye kwete seakanaka sevamwe vehanzvadzi dzake. Zvisinei, sezvo mutambo unofambira mberi, VaDarcy vanonzwisisa kuti chikamu chikuru chevanhu vakamukomberedza vanomusvikira nekuda kwekungofarira, Erizabheti ariye ega anomuona nemaziso akasiyana.
Mr. Bennet: tateguru wemhuri ane chivakwa chakabatana nemumwe chizvarwa chemhuri, VaCollins. Akanaka uye ane tsika, anonzwa akanamatirana nevanasikana vake vaviri vakuru, Jane naElizabeth.
Mai Bennet: counterpoint yemurume wake ndeye makuhwa uye mukadzi asina zvaanoziva, ane simba rinogumira mukutsvakira vakunda vake akanakisa.
Jane bennetDangwe pahanzvadzi dzaBennet anonyara uye haana ruzivo, ari iye anonyanya kutsigira Charles Bingley, pakutanga aifarira hanzvadzi yake Elizabeth.
Mary bennet: Yakakomba uye inokatyamadza, ndiye anonyanya kukwezva pamasisita, izvo zvinomupa hunhu hwemusikana anovava.
Catherine BennettAnodaidzwa kuti "Kitty" nehanzvadzi dzake, haana maturo uye anodisa zvinhu, senge munin'ina wake, uyo ane chinetso chiri chinetso kwaari.
Lydia bennet: mudiki pane vese hanzvadzi shamwari yakatendeka yaCatherine uye mukadzi akasindimara uye asingafarire, pamwe nekutamba. Iye anopedzisira achisvetuka naVaWickham, zvichikonzera nyonganiso inogadziriswa apo Wickham akabvuma kumuroora achichinjana nemuchato wakabhadharwa.
Charles bingleys: Shamwari yepamoyo yaVaDarcy ndiyo inopesana neiyi. Mutsa uye mamioneya, anonzwa kugadzikana nemunhu wese, naJane Bennet ari mukadzi waanodonhera.
Kuzvikudza uye kufungira zvisizvo: Chiitiko chakakosha munhoroondo yezvinyorwa
Muna 1813, iro gore rekuburitswa kweKudada uye Kufungira zvisizvo, hukama pakati pevarume nevakadzi hwakaramba huchibva patsika yemagariro imomo murume aive achitarisira uye mukadzi akamanikidzwa kuwana maari nzira yekubuda muhupenyu hwakazara. yezvishamiso zvitsva, kugara zvakanaka uye kuchengetedzeka.
Mamiriro ezvinhu andainyatsoziva ane makore makumi maviri-anonzi Jane Austen, iyo hanzvadzi yake yaigovana kamuri uye yakanyora mumabhuku ekunyora manzwiro ake echinhu chaicho icho chaakaratidzika kunge chakatemerwa. Mushure mekunyorwa kwebasa rekutanga kunodaidzwa kwekutanga, baba vaAusten vakaedza kuzviisa kune muparidzi, zvichirambwa kusvika yakapihwa kune muparidzi uyo akamboburitsa rimwe basa reAusten, Sense uye Kunzwisisa.
Pakupedzisira, Kuzvikudza uye Kufungira zvisizvo kwakaburitswa muna Ndira 28, 1813 kuve kubudirira kwenguva asi, kunyanya, basa risingaperi.
Kufamba kwekukurumidza kwebasa, satire yemagariro inodururwa naAusten kana, kunyanya, kutyora kuri kuita nyaya yenyaya dzese dzerudo dzakashatiswa nemutambo uye nechinhu chinoonekwa ndizvo zvimwe zvezvikonzero nei basa rikatsungirira, zvakare kuva a feminism icon.
Nekuti kunyangwe hazvo mabhuku azvino azere nemagamba makuru uye zvinangwa zvakakomberedza kuenzana, muna 1813 chokwadi chaive chakasiyana, Elizabeth Bennet ari iye mukadzi aizosvika kuratidza kuti vakadzi vanogona kufunga. Zvekuti vanogona kufunga zvakare kuti murume uyu anga ari murume akakodzera here kana kuti kwete, kana kungo gamuchira kuti hupenyu hwavo hauna kuvimba chete nedziviriro yenhengo yechirume kuti ifare.
Wakaverenga here Kuzvikudza uye kufungira zvisizvo yaJane Austen akambo?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Mabhuku » Kuzvikudza uye Kusarura naJane Austen